Maxaa ku Cusbaa Debbaal Degga Sannad Guurada 27-aad ee Sannadkan
The Horn Tribune
USA: Shirweyne Caalamiya oo ku Baaqay in Jamhuuriyada Somaliland laga Barto Hannaanka Nabadaynta Adduunka
Xukuumadda oo Sheegtay in Xisbiyada Mucaaradku Sharci ku Yihiin Dastuurka
Madaxweyne ku xigeenka oo Saluugay ka Muujiyay Golayaasha Deegaanka Dalka
Wasiirka Faratoon oo Farriin u Diray Ardayda Helay Deeqda Waxbarasho ee Itoobiya
Booliska oo lagu Tababaray la Socodka Xogta Sumadda Cusub ee Gaadiidka
Shir Dhaqameed ka Furmay Magaalada Burco ee Xarunta Gobolka Togdheer
Madaxweynaha Somaliland oo Hoggaanka Xisbiyada Mucaaridka ku Eedeeyey Carqaladaynta Doorashada iyo Arrimo kale
Dawladda oo Caddaysay Tallaabada Laga Qaadayo Dhakhaatiirta Ajaanibka ah ee Aan Buuxin Shuruuddaha Laga Rabo
Xukuumadda oo Caddaysay in Cabashadu Furan Tahay Is Magacaabistuna Dambi Qaran Tahay
WEEDHA WARGEYSKA Isbaaro Ma Suurto Gelayso
Hargeysa (Dawan):- Guud ahaan gayiga Somaliland ayaa shalay laga xusay oo looga debbaal degay 27 guurada maalinta qarannimada Somaliland oo ku beegnayd 18, May laakiin curashada bisha barakaysan ee Ramadaan looga soo hor mariyay dhawr maalmood, lagana dhigay shalay oo taariikhdu ay ahayd 15-ka May.
Haddaba maalin kasta oo la qabto munaasibadda xuska qaran ee la soo noqoshada madax-bannaanida Somaliland waxa jira waxyaabo badan oo ku cusub isla markaana soo jiita maanka dadka iyo quluubta ka soo qayb galeyaasha iyo madaxda qaranka iyo guud ahaan bulshada debbaal degyada ka qayb qaadanaysa.
Haddaba waxaan si kooban isu dul taagaynaa waxyaabihii ku cusbaa debbaal degga 27 guurada ka qabsoomay caasimadda Somaliland ee Hargeysa.
Inkasta oo ay badnaayeen waxyaabaka kala duwan ee soo jiitay indhaha bulshada caasimadda Hargeysa iyo madaxda qaranka ee ka qayb gelayay debbaal degga 27 guurada maalinta la soo noqoshada madaxbannaanida iyo qarannimada Somaliland hadana waxaa jiray waxyaabo si gaar ah loo soo qoodan karo oo ka mid ah waxyaabaha ugu saamaynta badan ee laga xusi karo in ay ku cusbaayeen.
Waxyaabaha ugu waawayn ee aynu soo qaadan karno waxaa ka mid ah, madaxda hay’addaha qaramada midoobay iyo kuwa caalamiga ah oo ka qayb qaadanayay debbaal degga munaasibadda oo ku sugnaa halkii ay salaanta ku qaadanayeen Madaxda qaranka Somaliland oo uu hormuud u ahaa Madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi.
Waxa kale oo ka mid ahaa waxyaabaha layaabka ku noqday bulshada caasimadda Hargeysa oo aan xusaskii qaran ee hore aan lagu arki jirin ajaanibka kala duwan ee ku sugan caasimadda Hargeysa oo debbaal-degga maalinta qaran socod kaga qayb qaadanaya isla markaana la maraya calanka Somaliland iyaga oo sita qaybaha kala duwan ee marayay waddada wadnaha Hargeysa ee Madaxda qaranku sallaanta ku qaadanaynaysay.
Sidoo kale, waxa jiray oo ku cusbaa dhoollo tusyo kala duwan oo qaybaha bulshada caasimadda Hargeysa mid kastaaba xeelad u gaar ah uu la soo gole-tegay, waxaana aad indhaha dadka u soo jiitay wiil dhallinyaro ah oo afkiisa uu olol aad u wayni ka soo baxayo oo dab ka shidaya afkiisa.
Qofba haddii uu xeelad la yimi, waxa jiray isaguna wiil aad u da’yar oo lebisan derajada kabtan ee ciidanka qaranka oo ka qayb qaadanaya debbaal degga 27 guurada maalinta qarannimada Somaliland.
Waxaa xusid mudan oo aan la dhaafi karin in tartan dhanka degmooyinka caasimadda Hargeysa ahi uu ka dhex socday dhoolla tuska debbaal degga 27 guurada maalinta qarannimada Somaliland. degmada Gacan Libaax ee caasimadda Hargeysa ayaa kaga qayb qaadatay nooc ka mid ah wax-soosaarka dalka oo ay ku soo bandhgtay gaadhi beer ah oo dushiisa laga beeray dalagyo kala duwan oo muujinaya waxsoosaarka dalka iyo in isku filnaansho laga gaadho dhanka cuntada.
Ma aan illaawin, qalinkuna kama boodin in uu xuso gaadhi Somaliland lagu farsameeyay oo Somaliland lagu dhex hindisay oo soconaya, in lagaga qayb qaatay debbaal deggii shalay, waa gaadhi ka duwan dhammaan baabuurtii kale ee goobta bandhigga maalinta qaran lagu damaashaadayay, waana baabuur guudkiisu ka samaysan yahay loox aad u qurux badan.
Waxa kale oo aad dadka xusuustooda ugu weynaa oo aan hore uga baxayn markii debbaal degga uu soo maray wiil-dhallinyaro ah oo wata Hareemo Cad hor socda oo uu kaga qayb qaadanayay munaasibadda dhankiisa.
Mid ka mid ah madax-dhaqameedka Somaliland oo ku gaashaaman lebis hidde iyo dhaqan ah, isla markaana faraskiisa wata ayaa debbaal degga si weyn uga dhex muuqday oo aanay indhaha bulshadu marnaba ka jeesan intii uu waddada marayay.
Waxaan la illaawi karin markii nimcoolayda aynu dhaqano gaar ahaan geel dhalay lagaga qayb qaatay debbaal deggii caasimadda Hargeysa ee shalay oo la soo mariyay halo dhalay oo lammaan.
Sidoo kale, waxaa xusuus mudan in la sheego markii muwaadin kale oo reer Hargysa ahi uu debbaaldegga maalinta qaran kaga qayb qaatay kaariyoon si wanaagsan loo soo sharraxay oo uu dhanwalba ka lulay calanka Somaliland oo aad u dheer korna loo taagay oo hal joog in ka badan ka sarreeya kaariyoonka uu watay oo aad garanayso in uu u soo diyaar garoobay muujinta maalinta qaran ee uu caalamka kale oo dhan kaga duwan yahay.
Waxaa xusid mudan, madasha loogu talo galay in ay maraan dadka iyo gaadiidka loo qorsheeyay ka qaby qaadashada debbaal degga, markii uu soo maray aabbo iyo ilmo uu waalid u yahay oo ajaanib ah oo muujinaya nabad gelyada ay Somaliland ku joogaan in ay mudan tahay in ay la debbaal degaan bulshada reer Somaliland.
Dawannews Hargeysa office
Xarunta Boqortooyada Dumarka
Mosuo waa qabiilo degan dalka China gaar ahaan deegaanka Yunnan, waxayna xad la leedahay Tibet. Tirada bulshadan ayaa gaadhaysa 40,000. Caadooyinka
Mushaharka Hawlgabaka Eyga!
Booliiska dalka Ingiriiska ee Nottingham Shire ayaa go’aamiyay in Eyda la shaqaysay Booliiska ee hawlgabka noqda loo qoro mushahar marka ay shaqada
Xafladda Bandhiga Hirdida Lo’da!
Bandhigani waa mid ka mid ah xafladaha dalxiisayaashu xiiseeyaan ee ugu caansan dalka Spain. Waa xaflada ugu muhiimsan soo dhowaynta dalxiisayaasha
Maskii Hadyadda Siyaasadda Loo Bixiyay!
Noocyada hadiyadaha madaxdu isu gudbiso ayaa qaarkood yaab leyihiin, hadyadu waxay wadataa farxad laakiin haddii lagu soo hordhigo xayawaan nool oo
Ruushka oo Sameeyey Diyaarad aad uga Weyn Kuwii Hore
Shirkadda Diyaaraddaha ee Russian Plane, ayaa markii ugu horreysay isticmaalaysa diyaarad cusub oo aad uga weyn kuwii ay hore u isticmaali jirtay,
Horamarku Waa Midhaha Dadaalka
Dadka Hamiga sare leh waa kuwo tiro yar oo kooban kuwaasi ayaana dunida wax ka bedela. Thomas Adison oo ahaa ninkii soo saaray laambada laydhka wuxuu
Siyaasad Ayuu Qof Kasta Ku Qanciyay!
Nin Yuhuudi-Ruush ah ayaa ka dhoofayay madaarka Mosco, badhaaha Kastamka ayaa dharkiisa ka soo dhex saaray sanam yar, waxaana uu weydiiyay “
Biyaha Iyo Sharaabka Qabow Ee La Cabo Cuntada Ka Hor Ama Ka Dib Waxay Waxyeelaan Dheefshiidka.
Culimadda dhanka caafimaadka ayaa ka digay in qofku biyo qabow ama sharaab qabow cabo ka hor cuntada ama ka dib , iyada oo lagu sheegay natiijadda
Lawska Oo La Ogaadey Inuu Faa’iidooyin Caafimaad u lee Yahay Maskaxda iyo Jidhka.
Khubarro caafimaad oo ka tirsan maxadka Health and Science Institute ee dalka Canada ayaa caddeeyey inay jiraan faa’iidooyin badan oo uu lee yahay
Qisada : Naxdin Ayuu Fikirkiisu Geliyay!
Isaga oo jooga xafiiskiisa oo ku yaalla dabaqa sare, oo aad u fikiraya isla markaana isla maqan ayuu nin ordayaa u soo galay, kaasi oo qaylinayay,
Copyright © Dawan News ®All rights reserved. Designed & Developed By SomSite Designs